भ्र’ष्टाचारविरुद्ध बोल्दा मु’खमा पानी हा’लेर बो’ल्दिनँ : प्रधानमन्त्री ओली,तपाईं के भन्नुहुन्छ? – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
भ्र’ष्टाचारविरुद्ध बोल्दा मु’खमा पानी हा’लेर बो’ल्दिनँ : प्रधानमन्त्री ओली,तपाईं के भन्नुहुन्छ?
काठमाडाैँ, ३ असाेज । प्र’धानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्नुपर्दा आफू मु’खमा पानी हालेर नबोल्ने बताउनुभएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई स’म्बोधन गर्दै उहाँले कर्मचारीतन्त्र र सरकारको कुनै अंग पनि भ्रष्टा’चार नियन्त्रणमा बाधक नबनेको बता’उनुभयो ।
‘अब हामी सबै कि’सिमका संकीर्णता र आ’ग्रह पूर्वाह’ग्राहहरु छोडर विकास उन्नततिको बाटोमा एक’ताबद्ध भएर लागौँ । सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शब्द हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयाे, ‘अख्तियारको दुरुपयोग, भ्र’ष्टाचार, अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । मैले पटक-पटक भन्दै आएको छु- भष्ट्राचारर गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भष्टा’चारीको विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ ।’ उहाँकाे याे भनाइ भ्र’ष्टाचा’रविरूद्ध अ’स्पष्ट नभएर प्रस्ट अडा’नमा रहे’काे’तर्फ लक्षित थियाे ।
नेपालमा अझै पनि कतिपय कानुनी कुराहरु अपष्ट भएकाले विकासमा अघि बढ्न कठिन रहेको प्रधानमन्त्रीकाे भनाइ थियाे । उहाँले वि’कसित देशहरु पनि केही वर्षअघि हाम्रो देशजस्तै रहेको भन्दै कालो-गोरो भन्ने कुरा त्यागेर विकासलाई हेरेर अगाडि बढेको ब’ताउनुभयो ।
‘तर विकास राेकिएकाे छैन’
प्रधानमन्त्रीले हामी केही पछि परे पनि महामारीकाे अवधिमा पनि विकास कार्य नराेकिएकाे बताउनुभयाे । उहाँले नेपालमा दातृ मुलुकको सहयोग बढी रहेको ब’ताउँदै बैंक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भ’एको दा’बी गर्नुभयाे । ‘उद्योग-व्यवसायहरू रुपमा सञ्चालन भइ’रहेकै छन्, लकडाउनमा पनि वि’कास निर्मा’णका का’म भएका छन्,’ उहाँले भ’न्नुभयाे ।
तर महा’मारीकै कारण केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु उद्घाटन हुनमा ढिलाइ भए”काे भने उहाँले स्वीकार्नुभयाे ।
‘गत वर्ष आजकै दिन मैले सर’कार सञ्चालनको १८ महिनामा भएका उप’लब्धिको संक्षिप्त विवरण राखेको थिएँ । यदि कोरोना महामारी हुँदैनथ्यो भने आज गत बर्ष कबुल गरिएका कतिपय काम सम्पन्न भएको विवरणको चर्चा हुनेथियो,’ उहाँले भन्नुभयाे, ‘केही राष्ट्रिय गौरवका आ’योजनाहरु उद्घाटन हुने थिए।
भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय वि’मानस्थल सञ्चालनमा आएको हुने थियो । माथिल्लो तामाकोशी ज’लविद्युत आ’योजनाबाट उर्जा उत्पादन शुरु भएको हुने थियो । मेलम्चीको पानी आउन थालेको हुने थियो । रानीपोखरीको पु’नर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको हुने थियो । धरहरा नि’र्माणको कार्य सकिने थियो । निजी आवास पुन’र्निर्माणको काम पूर्ण रुप’मै भइसकेको हुने थियो ।न्युज२४ बाट
Previous जसपाबाट निलम्बित भएकी सरिता गिरीले नयाँ पार्टी घो’षणा गर्दै, यस्तो हुनेछ उनको पार्टीको नाम…हेर्नुहोस् ।
Next गोलभेडा नि’यमित रुपमा खाँदा यस्तो फाई’दै फाईदा ,थाहा पाउनको लागि पू’रा पढ्नुहोस!